Nintendo inogona kuburitsa yayo yega kutonga kwefoni mbozha | IPhone nhau
Nintendo ichaenderera mberi kubheja pane mafoni; aigona kuvhura ake ega kutonga
Zvinoratidzika kunge nguva refu yapfuura Nintendo akadzidza kuti ramangwana remitambo yakasarudzika iri pane nhare mbozha. Chinhu chakashata ndechekuti iri kubvunzwa, asi ivo vatovhura Miitomo uye vakavimbisa kuti vachatangisa mimwe mitambo yeIOS neApple. Ehezve, kwete usati watanga kujekesa kuti mazita akadai saMario kana Zelda aisazoendeswa kunzvimbo dzakasiyana dzekushandisa, pamwe dzatinonyanya kuda kuve nadzo pane yedu smartphone.
Akanga achitaura pane zviri kuitwa kukumbira nekuti, parizvino, ivo vangoburitsa mutambo mumwe uye chinotevera chavari kutaura nezvacho kuvhura vatungamiriri vemuviri, ndokuti, vatongi vemitambo inoenderana nemafoni uye mapiritsi. Izvi zvakazivikanwa naShinya Takahashi, maneja maneja wezvirongwa uye varaidzo yekambani yeJapan, pamusangano wepagore nevane masheya.
Nintendo ichagadzira vatongi vemitambo yemavhidhiyo efoni
Takahashi akati Nintendo arikuronga kuisa mari mukutonga kwemafoni uye mapiritsi, achiziva kuti kune akawanda atowanikwa, nekuti kuburitsa yavo kuchavatendera. gadzira yakanangana nevatongi vako.
Vanodzora panyama ekushandisa zvishandiso zvemuchina vatovepo pamusika uye isu tingangoda kugadzira chimwe chinhu pachedu zvakare. Ini ndinofunga nzira yaNintendo yekufunga ndeyekutarisa kana zviito zvekutamba zvisiri zvechokwadi zvisingaite (pasina mutungamiriri wepanyama kune akangwara mashandisirwo ezvishandiso) kugadzira uye nemabatiro atingaite izvozvo zviitike kugadzira iwo mutambo.
Kune rimwe divi, uye izvi zvinoita kunge zvinonakidza kwandiri, mutungamiri weNintendo, Tatsumi Kimishima akataura kuti kambani ichaenderera mberi nekudyara software inoenderana nemitambo yeIOS. Ivo vakatosimbisa munaKurume kuti vaizovhura mitambo mishanu, mumwe wavo Miitomo inoita kunge inokwezva vashoma vashoma vashandisi. Mimwe miviri yemitambo mishanu yakavimbiswa inozivikanwa zvakare: Kuyambuka Kwemhuka uye Moto Emblem. Hapana chinozivikanwa nezvevamwe vaviri parizvino.
Zvinotaridza kuti Nintendo achabheja zvakanyanya pamitambo yenhare mbozha, asi pachezvangu zvinoita senge kwandiri kuti vari kutora nguva yakareba uye kusaenda munzira kwayo. Nevatongi vakaita seNimbus varipo, chii chaungaburitse icho chingasimudzira ruzivo rwekutamba? Izvozvi chinhu chega chandingafunge nezvacho ndechekuti kure kwako kwaisanganisira nzvimbo yekubata, asi mafoni ese andinoziva ane touch screen. Tichaona kana ivo vakatishamisa, pane zvakanaka kana zvakaipa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Nintendo ichaenderera mberi kubheja pane mafoni; aigona kuvhura ake ega kutonga
Yekukurumidza kuenzanisa pakati peIOS 9.3.2 uye iOS 10 beta 2